Guri gubtay oo ku yaala Canada oo lagu rabo $3m - BBC News Somali
Guri gubtay oo ku yaala Canada oo lagu rabo $3m
23 Agoosto 2018
Xigashada Sawirka, Promerita Real Estate
Guri ku yaala dalka Canada oo ku gubtay dab ka kacay dalkaas ayaa soo jiitay dareenka dadweynaha kadib markii suuqa la keenay isaga oo lagu doonayo lacag dhan C$3.9 oo lacagta Canada ah, una dhiganta $3 milyan oo doolarka Maraykanka ah.
Gurigan ayaa gubtay sanadkii hore, iyada oo dadkii degenaa ay ka guureen.
Shirkaddii iibka u qaabilsanayd guriga ayaa sheegtay in qiimaha ay ku doonayso guriga uu yahay mid qiil leh, maadaamaa hantida ma guurtada ah ee magaalada Vancouver uu qiimahooda cirka isku shareeray.
Canada, dalkii barafka oo kuleel loogu dhimanayo
Canada oo ka hortagtay weerar argagixisnimo
Belgium oo xayirtay heshiis ganacsi ee Midowga Yurub iyo Canada
Magaaladan ayaa ah kuwa ugu qaalisan adduunka marka ay timaado in guri la iibsado, iyada oo qiimaha dhexdhexaadka ah ee guri lagu iibsan karo uu ka biloowdo $1.6 milyan oo doolar.
Wakiil u hadlay shirkadda iibinaysa, Hunt Tse ayaa taleefishinka CTV u sheegay in qiimaha lagu rabo guriga lagu jaangooyay meesha uu dhulka ku yaalo, baaxada uu leeyahay iyo waxa laga sameyn karo, balse aysan ahayn xaaladda uu hadda ku suganyahay.
Madaxweyne Afrikaan ah: Hay’adaha sirdoonku way i ceebeeyeen”
Iran oo xirxirtay diblumaasiyiin Reer Galbeed ah oo ay basaasnimo ku eedeysay
44 Daqiiqadood ka hor
Ciraaqiga qaxootinnimada ku tagay UK ee wasiirka ka noqday
Waa kuma Soomaaligii Ka taliyay Jasiiradda Maldives?
27 Juunyo 2022
Nin Soomaali ah oo saaxiibkiis oo madaxweyne ku-xigeen noqday awgeed waxbarasho ugu noqday
15 Juunyo 2022
Goormee Tiktok laga saari rabaa telefoonkaaga?
1 Luulyo 2022
Markii uu Turkiga shaaciyay arrin aan horey looga war hayn oo ku saabsan ciidamada Soomaaliya
Maraykanka iyo UK oo ka digay "khatar ka soo fool leh" Shiinaha
Hoggaamiyaha is qariya ee Taalibaan oo farriin lama filaan ah usoo diray Mareykanka